राउटे बस्तीमा आईलाग्यो यति ठुलो समस्या, १८ राउटेको मृत्यु – paradeskhabar.com
September 20, 2021 498
: चिसो भुइँमाथि पातलो खु’इलिएको म्याट । बुढ्यौलीले शरीर दिनप्रतिदिन चाउरिँदैछ । शरीर ढाक्ने कपडा छ न पानीबाट ओत लाग्ने गतिलो छाप्रो नै । ८९ वर्षीय राउटे कर्णबहादुर शाहीका दुःख यतिमात्र छैनन्, उहाँलाई लामो समयदेखि हाडजोर्नी दुख्ने समस्याले सताएको छ । अरुको साहारा बिना उठबस गर्न सक्नुहुन्न ।
Prevतपाइको आजको दिन शुभ,अशुभ कस्तो हेर्नुहोस राशिफल
Nextटिकटकबाट एक महिनामै एक करोड कमाई, अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म (भिडियो हेर्नुस्)
आज भदौ १४ गते श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल !